Fantaro i... ELIZA FREDA
Mpanoratra tantara an-tsehatra
— Narindran’i Heriarilala Andriamamonjy —
NY FIAINANY SY NY FIANARANY
Teraka tao Ambositra tany ho any amin’ny taona 1900 ANDRIANALY Alfred izay fantatra amin’ny solon’anarana hoe Eliza Freda. Nodimandry ny 1962 teo amin’ny faha-62 taonany izy. Voataiza tamin’ny fivavahana Kristianina izy raha nanovo fahalalana tao amin'ny sekoly kristianina Benjamin ESCANDE ao Ambositra araka ny voasoratra ao amin’ny Takelaka Notsongaina I tak 65. Mpitandrina Frantsay avy amin’ny MPF na Mission Protestante Française i Benjamin ESCANDE ka nampitondraina ny anarany ny sekoly. Na dia tamin'ny teny frantsay aza ny fampianarana tamin'ny Fanjanahantany dia tsy natao tsinontsinona ny fampianarana ny taranja malagasy tao amin'ity sekoly ity. Nampivelatra ny fitiavan'ny mpianatra ny literatiora malagasy izany ka tao amin'ny andiany faharoa navoakan'ny sekoly indrindra no nahitana ny Pôety Eliza Freda sy Bolespara (Rafanoharana); ny Pôety S. Bem (Randrianasolo) indray dia tao amin'ny andiany fahatelo araka ny nosoratan'i Robert Martel, 2011.
Sekoly Benjamin Escande ao Ambositra.
Lycée izy ankehitriny. Sary : Sylvie Raonizafy.
Lalana Escande. Takelaby ao Analakely - Antananarivo. Sary : Vony Mpikabary
Mpiasam-panjakana i Eliza Freda nanomboka tamin’ny taona 1925 ary Mpanoratra tamin’ny fanjanahan-tany rahateo. Heverina àry fa izany no anton’ny tsy nahazoana torohay maromaro mikasika azy, ary mety ho nahatonga azy niafina tamina solon’anarana mifanahatahaka amin’ny anaram-behivavy. Tsy fantatra mazava rahateo ny Ray sy Reny niteraka azy, toy ny tsy nahafantarana ny mombamomba ireo iray tampo aminy, ankoatra an'i ROSA BEBY rahalahiny mpanoratra, niaraka namorona taminy ny tantara an-tsehatra mitondra ny lohateny hoe "Tranon-kala".
Tonian'ny fanoratana ny gazety Tatsinanana izy araka ny voasoratra ao amin'ny Takelaka Notsongaina.
ELIZA FREDA SY NY POEZIA
Ny pôezia no tena nahafantarana azy, isan’ireny ny "Vetsovetso takariva" (nohirain’i Bodo, mpihira fanta-daza ankehitriny), "Ilay reny tsy miteny", "Hono...?", "Hiran-jaza kamboty".
Araka ny fandalinana nataon-dRanjarasoa L.J (2010) dia mpivetso ny fahafatesana koa izy, nihira ny fo sara-tiana ary ny embona sy hanina. Randriamarozaka, tao amin'ny "Revue de Madagascar" (1969), tak 101, aza nanambara fa mpiandrandra ny kintana amam-bolana i Eliza Freda, entiny hanalefahany ny alahelony. Rehefa maneho ny manjo azy koa izy dia mampitaha izany amin'ny singan-javaboahary mety ho tsy manan-danja loatra toy ny ravina mihintsana, singan'ahitra sns. Manamafy izany ny fanadihadian'i François-Xavier Razafimahatratra (2008) momba ny tononkalo "Vetsovetso takariva" nampiasana ny teny "tsiriry" ho fanehoana ny embona sy hanina, na amin'ny heviny tsiriry ahitra izany na amin'ny dikany tsiriry vorona.
MPAMORONA TANTARA AN-TSEHATRA
Ankoatra ny pôezia dia nanoratra tantara an-tsehatra maro izy toy ny:
- Tranon-kala (nosoratany niaraka tamin’i ROSA BEBY rahalahiny).
Hita taratra amin'ireo tantara an-tsehatra samihafa ny tononkira noforoniny.
- "Rehefa ny rano no misy tsingala", sanganasan'i Eliza Freda, nasian-dRatianarivo feony, nohirain-dRtoa Jeannette sy Raketamanga ary nolalaovina tao anatin'ny Tantara tsangana mitondra ny lohateny hoe "Tsi... ny".
- "Iarivoko o! Veloma ihany", sanganasan'i Eliza Freda, nanaovan'i Désiré sy Rakotoson tonony, nasian-dRatianarivo feony, nolalaovina tao amin'ny Tantara tsangana mitondra ny lohateny hoe "Tsy fidiny".
- "Vita voady ka dia tsofy rano", sanganasan'i Eliza Freda, nohirain'ny Tropy Jeannette araka ny feony nandrafetan-dRatianarivo azy ary nolalaovina tamin'ilay tantara tsangana hoe "Tsy fidiny".
- "Kibo saokin'ny nahiny", tononkiran'i Eliza Freda, nasian-dRasamy Gitara feony ary nolalaovin-dRtoa Jeannette Hélène tamin'ny tantara tsangana "Zana-boromahery".
- "Zay kanambina ahy", tononkiran'i Eliza Freda, Ranaivo-Ratianarivo no namorona ny feony ary nohirain-dRtoa Jeannette sy Rasamy-Gitara.
Teatra Monisipaly Ambatovinaky, naorina tamin'ny 1899. Sehatra anisan'ny nilalaovana ny sangan'asan'i Eliza Freda. Nakatona tamin'ny 1951 ary narodana tamin'ny 1953 noho ny rindrina voalaza fa nitriatra. Misy fiheverana anefa fa antony ara-politika no nanaovana izany satria ambohi-pihaonan'ny Malagasy maro io toerana io ka nahiana ho ivon'ny fikotrehana fanoherana ny fanjanahan-tany.
Sary nindramina : Edition Guyard Tananarive
FANAPARIAHANY NY ASA SORANY
Ny gazety no sehatra nivelaran’ny asasorany ka santionany amin’izany ireto: Tanamasoandro, Trompetra volamena, Diavolana, Ny Telegrafy, Akon’iarivo, Ny Mpandinika sns.
Nandray anjara tamin’ny boky Kalokalo Tatsinanana ihany koa izy, izay amboaran-tononkalo nifarimbonany tamin’ny pôety 10 lahy indray nihira taminy dia : Ny Avana, Ignace RATSIMBAZAFY, Jean Joseph RABEARIVELO, Fredy RAJAOFERA, Meteora, Josefa RAJAONAH, RAFANOHARANA, Jean Narivony, Lusio B ary Rodlish. Ny antom-pisian’ity amboaran-tononkalo ity dia ho fahatsiarovana ilay pôety maty tanora, Samuel Ratany.
FIKAROHANA MOMBA AZY
Nanaovan-dRANJARASOA (L.J) asa fikarohana ahazoana ny CAPEN (Certificat d'Aptitude Pédagogique de l'Ecole Normale) tamin'ny taona 2010 mitondra ny lohateny hoe : "Ny tarakevitry ny fahafatesana araka ny ahitana azy ao amin’ny Tononkalon’i Eliza Freda sy i Samuel Ratany."
Marihina fa ao Analakely Antananarivo dia ahitana lalana mitondra ny anaran'Andrianaly Alfred (Eliza Freda).
Boky sy revio
- Robert Martel. 2011. "Une école protestante à Madagascar Ambositra 1951-2011. Edition Karthala.
- RANJARASOA (L J). 2010. "Ny tarakevitry ny fahafatesana araka ny ahitana azy ao amin’ny Tononkalon’i Eliza Freda sy i Samuel Ratany", mémoire de CAPEN.
- François-Xavier Razafimahatratra. 2008. "De l’exil à la nostalgie au travers de la littérature malgache". Paris. Etude Océan Indien, INALCO.
- RAJAONA (S). 2002. "Takelaka notsongaina". Antananarivo. Ambozontany Analamahitsy.
- Rabemolaly Fanomezana sy ny namany. 1973. "Fary Mamy, Teny sy Haisoratra ho an'ny Fianarana ankapobeny sy tekinika: kilasy fahatelo". Antananarivo. Editiona Salohy. Trano Printy Loterana.
- Randriamarozaka. 1969. In "Revue de Madagascar" N°47 - 48, troisième et quatrième trimestres nouvelle série.
- Rajaobelina (P). 1958. "Lahatsoratra voafantina". Antananarivo. Imprimerie Luthérienne Antsahamanitra.
- Kalokalo Tatsinanana, (Anthologie illustrée), Imprimerie Nosy, Tananarive, 1er janvier 1929.
Rtoa Andriamihamina Sahondra (Talen'ny Arsiva Nasionaly) tamin'ny famatsiana tahirin-kevitra
Atoa Andriamihamina Rija, nanazava ny momba ny lalana Andrianaly Alfred
Rtoa Rasoazananiharisoa Voniniaina Bakoly (Vony Mpikabary) nikaroka ny lalana Benjamin Escande sy naka sary.
O, ry kintana voahangy,
Izay mitsidika ny tany,
Avy any alavitra any!
Izato endrikao diamondra
Toy ny anja-bolafotsy,
Dia nirahina hitonodra
Inona, ry kintana iny,
No nitiavanao hifindra?
Ve no tsy aritrao indrindra?
Tsetra ve no mba nanery,
Sento ve no nahataona?
Ka netezanao hijery
Itony taninay misaona!
Moa hilaza "misitery"
Zava-miafina ao am-pita,
Ka hamboraka ny miery
Ao an-koatry ny tsy hita.
Misy hafatra ve "any"
Sa mitsidika eto ihany
Mba hitantana ny jamba?
O, ry kintan'ny hariva,
Dia vangio ny toerana iva
Ka tsinjovy ny olona ory!
Dia ety no mba atopazy
Itony taratrao tsy lefy;
Izany herinao fohazy
Hampisava ny fo tomefy.
Ka ny nofin'ny Poeta
Nindran-kery avy teny,
Ilay fisainana manjeny!
O, ry kintana, todiho,
Ity Fanahiko mimalo;
Tairo kely, ka bitsiho
Ndrao sodoky ny mandalo.
In Fary Mamy, 1973, Tak. 88
Misy maro izao mikalo
Tsy mba manam-pahavalo;
‘Zaho kosa toa mimalo,
Toa latsain’izay mandalo
Ao ny revo mikorisa
‘Zaho kosa mitanisa
Fahorian-tsy hita isa!
Ao ny voky safosafo
‘Zaho kosa misakafo
Sady mandry tsy amin’afo!
Ao ny mbola velon-dReny,
‘Zaho kosa… voa dia eny
‘Zay tazaniko rehetra
Samy lavitry ny tsetra
‘zaho kosa manjoretra
sy mijaly an-tery setra!
Ndreo ny vorona misiaka
‘Zaho kosa toa mifiaka
Ranomaso be mandriaka !
Rony kintana misosa
Tsy mba manana mpifosa
‘zaho kosa! zaho kosa
Mitanondrika fa osa!
Taratry ny fo mazava;
‘Zaho kosa maizin-dava;
Tozo oran-tsy nisava!
O, ry lanitra ô, avoty
Fa mahantra ity kamboty
Zaza bodo diso angoty
Vao nitsiry dia voaoty!
Satriko aza anio ihany
Dia ilaozana ny tany
Ka hisinda hankany
‘Lay fanahy nosimbany
In Kalokalo Tatsinanana
Tapak’ahitra entin-drano ka indrisy!
Tsy mba zatry ny fanalan-keniheny
Ka maniry ny hambobain’ny ela-dReny
Ombimanga diso ala mantsy aho,
Manin-kavana tsy fohy fa mitalaho
Any ambadika atsimon’iny Bainga
‘Zay milaza tsy misento dia mandainga!
Mpivahiny mbola lavi-dalana aho,
Raha sendra tianareo mba iaraho
Aza ilaozana midify fa andraso
E, ry vorona eny ampamoizamaso!
Manantena sady miandry fatratra aho,
Ka ny taratrao, ry Volana, apariaho!
Dia vimbino izany alahelo izany
Fa ianao no tazana, eto tsinjo any!
O, ry kintana, ombay manatrika aho,
Mila tsy ho very dia, ka hiresaho!
Hilazako ‘zay mba zavatra mihatra!
Sao dia tolan’ny manjo ka ivavaho
O! ry Zoky! O! ry Zandry hany fara!
Tsofy rano mba ho tonga soa aman-tsara!
Dia veloma sy masina indrindra, ho’aho,
Ny fiarovan’ny Tsitoha no angataho!
’Zany “Sandriny Mahery” sy hiala,
Fa hivimbina ny dian’ilay malala!
In Takelaka Notsongaina I, tak. 91
ILAY RENY TSY MITENY
Hatry ny ela
No tavela ...
Tsy mba niala;
Samy hita ...
Fa nilefa ...
No mba sisa
No mba hany
Tratra tany ...
'Zao ny zoky!
Eny ho eny,
Toa tsy hafa
O! ry Neny,
'Zao no teny,
Tsy ho ory,
Tsy mba foana
Tsy mba vola
Io no lova
Tsy mba miova !
In "Lahatsoratra voafantina", Tak 40-41